तंत्रिका नोड्स - यो के छ र तिनीहरूले के के हुन्?
Ganglia (अन्यथा - तंत्रिका नोड) - विशेष कक्षहरूको संग्रह। यसमा शरीर, डेंटिटर र अक्षहरू हुन्छन्। तिनीहरू, बारी मा, तंत्रिका कोशिकाहरु लाई हेर्नुहोस। साथै, तंत्रिका नोडले सहायक ग्लियल कक्षहरू समावेश गर्दछ। तिनीहरूको कार्य न्यूरोन्सको लागि समर्थन सिर्जना गर्न हो। एक नियमको रूपमा, तंत्रिका गङ्ग्लिया जोडिएको ऊतकले ढाकेको छ। यी क्लस्टरहरू केवल भक्तहरूमा फेला परेनन् तर केही अचेत जनावरहरूमा पनि पाइन्छ। एकसाथ जोड्दै, तंत्रिका नोडहरू जटिल संरचनात्मक प्रणालीहरू सिर्जना गर्छन्। एक उदाहरण एक श्रृंखला या plexus को संरचना हो। थप लेख मा अधिक विस्तार मा यो तंत्रिका गिरोहहरू के कुरा वर्णन गरिनेछ, तिनीहरूलाई कसरी अन्तरक्रिया छ। साथै, मुख्य प्रजातिको वर्गीकरण र वर्णन प्रदान गरिनेछ।
गंगालिया, यी व्यक्तित्वहरूमा अवस्थित, केहि विशिष्टताहरू छन्। त्यसकारण तिनीहरू केन्द्रीय तंत्रिका तवरमा प्रवेश गर्दैनन्। केहिले उनलाई तुलसी गंग्लिया भनिन्छ। यद्यपि, सबैभन्दा सही शब्द शब्द "कोर" हो। तंत्रिका नोड्स र प्रणाली जुन तिनीहरू बनाउँछ, तंत्रिका तंत्र को घटक को बीच जोडने वाला तत्व हुन्। तिनीहरू आवेगहरू पास गर्छन् र केहि आन्तरिक अंगहरूको अपरेशन नियन्त्रण गर्छन्।
सबै गङ्गलिया धेरै प्रकारका मा विभाजित छन्। आधारभूत विचार गर्नुहोस्। "रीडिन गङ्ग्लियोन" को अवधारणा सेन्सर (आम्दानी) तत्वहरू जोड्दछ। दोस्रो प्रकार स्वतन्त्र तत्वहरू हो। तिनीहरू समान (स्वायत्त) तंत्रिका तंत्रमा स्थित छन्। मुख्य दृश्य बेसल छ। तिनीहरूको घटक तंत्रिका नोडहरू हुन् जुन सेतो कुरामा छन्। यो मस्तिष्कमा समावेश छ। न्यूरॉन्सको काम शरीरका केही प्रकार्यहरू विनियमित गर्दै, साथसाथै तंत्रिका प्रक्रियाहरूको प्रदर्शनमा सहयोग पुर्याउँदछ। वनस्पति प्रकार पनि छ। यो तंत्रिका एक एक गाँठो हो। यो तत्वले स्वायत्त तंत्रिका प्रणालीलाई बुझाउँछ । यी नोडहरू स्पिडको साथ पास हुन्छ। शाकाहारी गंग्लिया धेरै सानो छन्। तिनीहरूको आकार एक मिलिमिटर भन्दा कम हुन सक्छ, र सबैभन्दा ठूलो मटरहरूसँग मिल्दो हुन्छ। शाकाहारी गंग्लिया को कार्य आन्तरिक अङ्गहरु र आवेगहरुको वितरण को विनियमन हो।
शब्द "plexus" संग तुलना
पुस्तकहरूमा, शब्द "plexus" अक्सर पाइन्छ। यो "गङ्ग्लिया" शब्दको लागि एक पर्यायको लागि लिन सकिन्छ। यद्यपि, विशेष वेफर्सले प्रोसेक्स भनिन्छ। तिनीहरू एक निश्चित क्षेत्रमा बन्द क्षेत्रमा उपस्थित छन्। एक गिरोह synaptic सम्पर्कको जडान को क्षेत्र हो।
अभिव्यक्ति को दृष्टिकोण देखि, दुई प्रकार को प्रतिष्ठित छ। पहिले को केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र भनिन्छ। यहाँ तपाईं मस्तिष्क र पदक समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रकार नोडहरूको एक सेट हो, तंत्रिका अन्त र आफूलाई नसबिन। यस परिसरलाई परिधीय तंत्रिका तंत्र भनिन्छ।
तंत्रिका तंत्र एक तंत्रिका ट्यूब र गंग्लियोनिक प्लेट द्वारा बनाईएको छ। पहिलो को क्रेनियल भागमा दिमागहरू इन्ट अङ्गहरूसँग, ट्रंक भाग - रीडिन कर्डमा हुन्छन्। गंग्लियोनिक प्लेट प्लेट स्पाइनल, वनस्पति नोड्स र क्रोमफिन ऊतक। तंत्रिका ऊतक प्रणाली को एक घटक को रूप मा मौजूद छ जो शरीर को इसी प्रक्रिया को विनियमित गर्दछ।
तंत्रिका नड्स तंत्रिका कोशिकाओं को एक संघ हो जसले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सीमाहरु लाई बाहिर जान्छ। वनस्पति र संवेदनशील प्रजातिहरू छन्। पछि रिकिनल कोर्ड र क्रेनियल नसों को जड को बगल मा स्थित छ। आकारमा, स्पिनल नोड स्पिन्ड जस्तो देखिन्छ। कनेक्टिव ऊतक को एक गोले द्वारा घिमिरे। यो पनि एकाइमा घुसाउनुहोस्, रगतको बिरुवाहरू राख्दा। रीढ़ की हड्डी मा स्थित तंत्रिका कोशिकाओं को प्रकाश हो, ठूलो आकार मा, उनको नाभि सजिलै भेदभाव हो। न्यूरोन्स समूह बनाउँछ। रीडिन नोड को केन्द्र को घटक तंत्रिका कोशिकाओं र endoneurium को परत को प्रक्रिया हो। साइन्स-डेन्डरिटहरू स्पिनल तंत्रिका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरू हुन्छ, र परिधीय भागमा अन्त्य हुन्छ, जहाँ तिनीहरूको रिसेप्टरहरू अवस्थित छन्। एक दुर्लभ मामला छद्म-एकदिवसीय न्यूरोन्स मा द्विध्रुवीय न्यूरोन्स को रूपान्तरण हो। यो तिनीहरूको परिपक्वताको समयमा हुन्छ। छद्म-एकदिवसीय न्यूयोनको बाहिर, त्यहाँ एक सरोकारवाला हो जसले सेललाई लुगा दिन्छ। यो अचम्ममा छ, अर्को नाम "डेंटिट्रिक", र प्रभावकारी, अन्यथा - अक्षीय, भागहरु।
दिदीहरू र अक्षहरू
यी संरचनाहरूले Myelin sheaths को कवर गर्दछ , जसबाट न्यूरोलॉटोटोयोटिकहरू घटक हुन्। रीडिन नोड को तंत्रिका कोशिकाहरु ओलिगोडेंडरोगली कोशिकाओं देखि घिरे भएका छन्, जसमा मन्टल ग्ल्योकोटीज, सोडियम ग्लियोकोयोटिक्स र उपग्रह कोशिकाहरु जस्तै यस्तो नाम छ। यी तत्वहरूसँग निकै सानो राउन्ड न्यूक्ली छ। साथै, यी कक्षहरूको लिफाफे जोडिएको ऊतकको कैप्सूल द्वारा घिमिरे छ। यसको घटक अण्डाकार आकारको न्यूक्ली द्वारा अन्यबाट फरक छ। रीडिन नोड को तंत्रिका कोशिकाहरुमा निहित जैविक रूप देखि सक्रिय पदार्थहरु एसीटिलोक्लोन, ग्लोटामिक एसिड, पदार्थ पी।
शाकाहारी, वा स्वायत्त, संरचनाहरू
स्वतन्त्र तंत्रिका नोड धेरै ठाउँहरूमा अवस्थित छन्। पहिलो, स्पिन नजिकै (त्यहाँ पैराभरटेब्रल संरचनाहरू छन्)। दोस्रो, रीइनको सामने (पूर्ववर्तीब्रिल)। यसको अतिरिक्त, स्वतन्त्र नोड्स कहिलेकाहीँ अंगहरु को पर्खालहरुमा भेटिन्छ। उदाहरणका लागि, हृदयमा, ब्रोंकस र मूत्राशयमा। यस्तो गिरोहलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनिन्छ। अर्को प्रजाति अंगहरु को सतह को नजिकै छ। Preganglionic तंत्रिका फाइबर स्वायत्त संरचनाहरु संग जोडिएको छ । तिनीहरूले केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रबाट न्यूरोन्स प्रक्रियाहरू छन्। वनस्पति क्लस्टरहरू दुई प्रकारमा विभाजित हुन्छन्: सहानुभूति र परजीवीमेटिटिक। लगभग सबै अंगहरु सेलगृहहरु बाट पोस्टगंग्लियोनिक फाइबर प्राप्त गर्दछ जुन वनस्पति संरचनाहरु को दुवै प्रकारहरुमा हुन सक्छ। तर क्लोस्टरहरूको प्रकारमा आधारित, न्यूरोन्सहरू फरक छ। त्यसोभए, सहानुभूतिपूर्ण कार्यले हृदयको कामलाई बलियो बनाउन सक्छ, जबकि परजीवीपीठीय प्रभावले यसलाई घटाउँछ।
स्वतन्त्र नोडको प्रकारको बावजुद, तिनीहरूको संरचना लगभग पूर्णतया मेल खान्छ। प्रत्येक संरचना संयोजक ऊतक को मूर्ति द्वारा कवर गरिन्छ। स्वायत्त नोडहरूमा त्यहाँ "बहुपोल" भनिने विशेष न्यूरोन्सहरू छन्। तिनीहरू एक असामान्य आकार, र साथ नै न्यूक्लस को स्थान द्वारा प्रतिष्ठित छन्। त्यहाँ धेरै न्यूक्ली र क्रोमोसोमहरूको संख्या बढेको कोशिकासँग न्यूरोन्स छन्। न्यूरोलियन तत्वहरू र उनीहरूको प्रक्रियाहरू कैप्सूलमा संलग्न छन्, जसमा ग्लियल कक्षहरू उपग्रहहरू छन्। तिनीहरूलाई म्यानली ग्ल्योकोटे भनिन्छ। यस खोल को माथिल्लो तह मा एक कनेक्टिविटी ऊतक को नजिकै झिल्ली हो।
यी न्यूरन्सहरू, सञ्चालन चलिरहेको मार्गहरूसँग, स्वतन्त्र तंत्रिका प्रणालीको एक metasympathetic भाग हो। हिस्टोलोजस्ट डगेलको अनुसार, संरचनात्मक प्रकारका ढाँचाहरूमध्ये तीनवटा किस्महरू कोशिकाहरू प्रतिष्ठित छन्। पहिलोमा प्रकारको लामो-प्रकार प्रभावकारी तत्वहरू समावेश छन्। यी कक्षहरूमा ठूला न्यूरोन्स छन्, जसमा dendrites लामो छन्, र अक्ष छोटो छ। समान afferent तंत्रिका घटकहरु लामो र dendrites, र axons द्वारा विशेषता हो। र संघीय न्यूरोन्स पहिले दुई प्रकार को कोशिकाहरु लाई जोड्नुहोस।
तंत्रिकाको कार्य रीडिन कर्ड, दिमाग र तंत्रिका संरचनाको तंत्रिका केन्द्रहरू जोड्नु हो। प्रणाली को तत्वहरु कनेक्टिव ऊतक को माध्यम ले अन्तर्क्रिया गर्दछ। तंत्रिका केन्द्रहरु प्रसंस्करण जानकारी को लागि जिम्मेदार क्षेत्रहरु हुन्। लगभग सबै संरचनामा ध्यान दिइएका दुवै फाइबरहरू र प्रभावकारी फाइबरहरू हुन्छन्। फाइबरहरूको एक सेट, जुन वास्तवमा एक तंत्रिका हो, केवल इलेक्ट्रोनिक इन्सुलेटिंग माइलेइन म्यानद्वारा संरक्षित संरचनाहरू समावेश गर्न सक्दछ। तिनीहरू उपस्थित छन् र तीहरूसँग "कवर" छैन। यसको अतिरिक्त, तंत्रिका फाइबर कंक्रीट ऊतक को एक तह द्वारा विभाजित छ। यो छुटकारा र भित्तापन द्वारा विशेषता हो। यस तहलाई endoneurium भनिन्छ। यसले एक सानो संख्यामा कक्षहरू समावेश गर्दछ, जसको थोक कोलेजनिक रेसिइकुलर फाइबर हो। यस ऊतकमा सानो रक्त वाहिकाहरू छन्। तंत्रिक फाइबर संग केहि बन्डलहरु अन्य कनेक्टिविटी ऊतक - पररेनुरियम को एक घडी को वरपर छ। यसको घटक अनुक्रमित कक्षहरु र कोलेजन को फाइबर स्थित छ। क्याप्सूलले सम्पूर्ण तंत्रिका ट्रंक लिन्छ (यो epineurium भनिन्छ), कनेक्टिविटी ऊतकबाट बनाइन्छ। यो, बारी मा, फाइब्र्रोब्ल्लाट कोशिकाहरु, म्याक्रोफेज र मोट घटक संग समृद्ध छ। यसमा रक्त वाहिकाहरू छन् तंत्रिका अन्तको साथ।
Anoscopy यो विधि के हो र यसको विशेषताहरु के हुन्?
अनुहारमा एट्रोफिक अनुहार: उपचारका कारणहरू, विशेषताहरू र तरिकाहरू
के भने शरीर itches?
कोलेस्ट्रोल: महिला मा उमेर 50 पछि दर (तालिका हेर्नुहोस्)
कम्पनी वित्तीय विवरण (रास 4/99)। वित्तीय बयान र यसको लागि सामान्य आवश्यकताहरु को संरचना
को जाडो बेलामा ब्रीम पक्रने लागि tackles। पाठ्यक्रम मा एक ब्रीम कसरी भेट्टाउने?
"बतास" - को रुबल मा रेस्टुरा। वर्णन, सम्पर्क, मेनू र ग्राहक समीक्षा
वेलिको Tarnovo आकर्षण: विवरण र रोचक तथ्य
म क्रिमीआ को बलौटे समुद्री तट जाने गर्नुपर्छ
एक अर्ध बिस्तर - बाँकी सार्वभौमिक फर्नीचर
Konstantin Batyushkov: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य। रूसी कवि Batyushkov Konstantin Nikolaevich: छोटो जीवनी